Iskaashi lagu hormarinayo Caafimaadka Bulshada - King County
PICH grant history PICH in Somali
PICH in Somali
Bulsho Xooggan macnaheedu waa caafimaad wanaagsan oo qof kasta helo
Abuurista Fursado Caafimaad Qaba
Shamso Issak, Executive Director, LivingWell Kent
Caafimaadka Dadweynaha—ee Degmada Seattle iyo King County waxa ay la shaqeynayaan isbhaysiyada ugu muhiimsan si ay u xaqiijiyaan waxa ay bulshadu u baahan tahay si caafimaad ugu noolaato. Ma aha oo kaliya wax barista dadka si ay u sameeyaan doorashooyin caafimaad, balse waa jejebinta xeydaabyada ka sokeeya in la helo caafimaad loo siman yahay. Xubnaha bulshadeena iyo hoggamiyeyaasheena waxa ka go’an iney hagaajiyaan fursadaha uu qof kasta ku heli karo nolosha ugu caafimaadka wanaagsan.
U Shaqeynta caafimaad loo siman yahay
Caafimaad loo siman yahay macnaheedu waa in qof kasta heysto fursad caddaalad iyo sinnaan ku dhisan. Isbaheysiga Caafimaad ee King County, Cisbitaalka Caruurta Seattle iyo Caafimaadka Dadweynaha—Seattle iyo King County waxa ay u mataanoobeen barnaamijyo xiriiri ah oo bulshadu hoggaamiso (ku jeedda is Baheysi lagu horumarinayo Deeqda Caafimaadka Bulshada) taasi oo horseedi doonta natiijo caafimaad fiican oo qof kasta helo—kuwaasi oon ku koobneyn kuwa imika caafimaadka qaba oo kaliya.
Si wada jir ah, iskaashigeenu wuxuu ogaaday isla markaana ka go’an inuu ka shaqaeeyo caafimaad loo siman yahay oo ku saleysan seddex arrimood: in la helo cunto fiican, dhadhaqaaqyo iyo jimicsiyo tayo leh oo jirku helo, meelo cagaaran, bey’ad ka madax bannaan sigaarka iyo ilo ku jeeda ka hortagga tubaakada.
Sidee baannu ku sameyn karnaa
Cunid Caafimaad leh
Qof kasta si xaq ah uma helo cunto caafimaad oo fareesh ah--taasi waxa ay saameyn weyn ku yeelatay wax kasta laga bilaabo khatarta sokorowga ilaa waxbarashada hore ee caruurta. Barnaamijyda cunista caafimaadka ku saleysan waxa ay kordhiyaan u sinnaanta helitaanka cunooyinka, in cuntada caafimaadka leh ahaato mid la awoodi karo, le heli karo, dhaqankana ku habboon.
Ku Noolaanshaha Firfircooni
Bulshooyinku waxa ay u baahan yihiin meelo nabad ah oo dhaqdhaqaaqa jirka ku habboon caafimaadna laga heli karo. Ku noolaanshaha barnaamijyo firfircooni ku saleysan waxey horumariyaan manhajka waxbarashada jimcsiga jirka ee iskuullada dadweynaha iyo hagaajinta beeraha nasiinnada iyo ku dhex socodka xaafadaha.
Ka Hortagga Tubaakada
Goynta sigaarka si buuxda waxay ku xiran tahay wada shaqeynta bulshooyinka oo dhan, kaliya kuma koobna midka sigaarka cabba. Shaqada Hey’adda PICH ee ka hortaagga cabista sigaarka waxa ka mida in la ballaariyo bey’adaha sigaarka ka mamnuuca ah sida beeraha nasashada, dhismayaasha guryaha dhaadheer iyo jaamacadaha, iyo in lala xiriiro bulshooyinka deegaanka si loo gaarsiiyo farriimo gaara oo ku jeeda ka go’id joogto ah iyo ka kortag lagu taageerayo luqado kale duwan.
La kulan Isbahesigeena oo shaqooyinkooda ku gudo jira isla markaana baro dadaalkooda ku jeeda in laga dhabeeyo in qof walba caafimaad ku noolaado
Qaar ka mida taariikhdeena
Mustaqbal ku jaheysan caafimaad uu helo qof kasta
Iyadoo la kaashanayo Isbaheysiyada, maalgelinno iyo taageero, kooxaha bulshada iyo xubnahooda waxa dhismaya musqtabal caafimaad qof kasta helo. Wax ka baro dadaalkeena joogtada ah, tallaabooyinkii hore iyo xiriirka xoogeysanaya. Si wada jir ah, waxanu u abuureynaa dadka fursado dhab ah oo caafimaad.
Waxanu dooneynaa inaannu leenahay tabaha, ilaha, iyo warar kuu diyaar ah si shaqadaadu dallacaad u hesho. Riix meelaha hoose middii aad doonto si aad u baahiso wararka: Wararka sawirrada xambaarsan waxa ay ku wanaagsan yihiin in lala wadaago baraha bulshada, Power Point waxaad u isticmaali kartaa kulammada, ama bogga daabacmi kara waxaad u qeybin kartaa kulammada lacag bixiyeyaasha. La wadaag kooxahaaga, kuwa aad xiriirka la leedahay, iyo bulshadaada daabacaad, boost garee ama seef gareyso mid kasta oo ka mida ilahaasi.